I-Android Q ikwabonelela ngokulala ngokuQhelekileyo | I-Androidsis
I-Android Q ibonelela ngokulala okuguqukayo kwabanye abasebenzisi
UAron Rivas | | Izixhobo ze-Android, Izaziso
Zimbini izinto ezizisayo Android Pie kukukhanya okuguqukayo kunye nebhetri eguqukayo. I-Android Q izisa enye ifowuni Ukulala okuguqukayoukongeza kwi Zonke iindaba esele sichaze malunga nale nguqulo intsha yeGoogle OS yee-smartphones.
Abanye babo sele befake i-beta yesithathu ye-Android Q bayifumene umsebenzi omtsha kwimenyu yokuseta, kuba ayibhengezwanga njalo.
Ukuba usebenzisa i-Android Q Beta 3, jonga I-Adaptive o Ilungelelanisa kwimenyu yokuseta. Ukuba iyafumaneka kuwe, kufanele ukuba ibe kwiziphumo zophando.
Indawo yokulala eguqukayo kwi-Android Q
Inkcazo yento yokulala eguqukayo ithi "Iscreen sakho asizukuhamba mnyama kwaye uza kulala xa isixhobo sibona ingqalelo yakho yangoku". Ukusuka kwinkcazo, kubonakala ukuba ifowuni iya kukwazi ukubona ukuba uyayijonga, nokuba awuyichukumisi, kwaye iya kuthintela isikrini ukuba singalali.
Oku iyelelene kwi Smart Stay kwiSams eyasungulwa ngeGPS S3 kwiminyaka eliqela eyadlulayo. Inqaku lisebenzise ikhamera yangaphambili yefowuni ukwazi ukuba umsebenzisi ujonge kwiscreen.
Akukho tshintsho lomsebenzi, Kwaye ngenxa yokuba iseku-beta, oko kuthetha ukuba ayigqityiwe, kuncinci ukugqibelela. Asazi ukuba uGoogle uya kuyisebenzisa kwakhona ikhamera yangaphambili yeli nqaku.
Iifowuni ezihambelana ne-beta yesithathu ye-Android Q
Okwangoku, unokusebenzisa amanye amanqaku abhengeziweyo kuGoogle I / O ebibanjelwe kutshanje, enje ngeNdlela eMnyama, iiMiboniso eziSongelayo, indlela yokuGxila, kunye nokunye. Unokufunda ngakumbi ngayo ngokungena kwikhonkco yesibini esishiye ngaphezulu, kumhlathi wokuqala weli nqaku. Apho siqaqambisa yonke into i-beta ye-Android Q yamvanje emayibonelele ngayo, encinci.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Android Q ibonelela ngokulala okuguqukayo kwabanye abasebenzisi
NgoHuawei e-helm, iinkampani zaseTshayina zikhokelela kwizicelo zamalungelo awodwa omenzi wechiza we-5G
I-Sharp Aquos R3: Isiphelo esitsha esine-notch ephindwe kabini